Eyona ndlela ihamba phambili ngololiwe eYurophu | Ukuhamba kwe-Absolut
Iindlela kaloliwe best eYurophu
Ngaphandle kwento yokuba inqwelomoya iseyeyona ndlela isetyenziswayo yezothutho sisininzi sabantu, inyani kukuba uloliwe ukwazile ukwenza indlela yayo kancinci kancinci kuhambo lokuhamba, ngakumbi eYurophu. Oku kuboniswa ziipasiti zoololiwe eziye zavela, ezivumela ukuhamba phakathi kwamazwe ahlukeneyo ngokukhululeka okukhulu. Kwelinye icala, ukuhamba ngololiwe eYurophu akufuneki kubize, phofu kunokwenzeka ukuba ufumane Olona tshintsho lusemagqabini no-Omio kwaye uqalise ukonwabisa. Kwaye kukuba amathuba anikezelwa nguloliwe xa useluhambeni ahlukile, ekufumaneni iindawo ezintle ezingenakwenzeka kwezinye iimeko.
Nangona kunjalo, ukufumanisa ubuhle bembonakalo yomhlaba kunye namaxabiso athile ngamanye amaxesha ayisiyiyo yodwa izibonelelo zale ndlela yokuhamba kodwa inika intuthuzelo enkulu xa useluhambeni kwaye, ewe, idibanisa uninzi lwezixeko ezikhulu. Le yokugqibela ikhokelela kwiindlela ezininzi kulo lonke elaseYurophu, kuxhomekeke kwiincasa kunye nomdla womhambi. Ngapha koko, ezona zixhaphakileyo zihlala ezo zidibanisa iingqukuva zaseYurophu okanye ezona zixeko zidumileyo kwilizwekazi, kodwa baninzi abakhetha iindlela zoololiwe ezikuvumela ukuba uhambe ilizwe elinye ngexesha elifutshane kwaye ungaphoswa nto.
Phakathi kwezi ndlela, uninzi lume ngoku lubalulekile ukuba sigqibe kwelokuba sithathe uhambo ngololiwe ngeYurophu. E-Spain, enye yeendlela yile ebalekayo iTranscantábrico ukujoyina iLeón kunye neSantiago de Compostela. Ngexesha leentsuku ezisibhozo, kutyelelwa izixeko ezahluka-hlukeneyo kunxweme lwaseCantabrian, bonwabele inkcubeko kunye nokutya okumnandi kwale ndawo. KwiScotland entle kukhenketho olukhethekileyo kakhulu kubathandi bemilingo encinci uHarry Potter. Umgaqo kaloliwe udibanisa iGlasgow neMallaig enikezela ngemihlaba efana nephupha apho iGlenfinnan Viaduct edumileyo kunye namachibi e-Elit kunye neShiel abonakala khona.
EJamani kukho enye yeendlela ezindala ehlabathini: ihlathi elimnyama. Lo mgca unxibelelana nezixeko zaseOffenburg kunye neConstance njengoko unqumla kwinxalenye yeHlathi eliMnyama elinomlingo, usenza iindawo zokuma ezimangalisayo kunye neelali ezincinci zeentaba. Kuba ulapha, akukhathazi ukubheja kwindlela ehamba ezona zixeko zibalulekileyo kwilizwe. Kodwa ukuba sifuna indlela engalibalekiyo, leyo yenziwa ngu iBernina Express ngeSwitzerland ne-Itali. Indlela ihamba iitonela ezingama-55, iibhlorho ezili-196, esona sixeko sidala eSwitzerland needolophu ezincinci eziseLombardy yase-Itali. Buhle ke obo hlobo bokuba indlela ibhengezwe njengeNdawo yeLifa leMveli ye-UNESCO.
IHolland lelinye lamazwe elinendlela entle, ngakumbi entwasahlobo. Umnxeba Indlela yeentyatyambo ibaleka ukusuka eHaarlem ukuya eLeiden kudlula kwiindawo ezinomtsalane zeetulip ezinemibala eyahlukeneyo. Nangona kunjalo, kwabo bafuna ukuhlala kufutshane nasekhaya, kuhlala kunokwenzeka ukukhetha ukubona iintloko ezinjengeParis, London, Brussels okanye Berlin. Ezi zinxibelelana kakuhle nabanye, ngoko ke ukuhamba phakathi kwazo akuyi kuba yingxaki. Okokugqibela, khumbula ukuba ezi ndlela zinokwenziwa ngaphandle kweYurophu, uhamba ngololiwe eJapan, umzekelo, Ngokudlula okukhethekileyo kwilizwe ngalinye ekuvumela ukuba ujikeleze ilizwe ngokulula nangokukhawuleza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Iindlela kaloliwe best eYurophu
Uhamba njani eParis